Somali News 07.19.21 | KWIT
Heerka waxtarka ee Degmada Woodbury waa 2% oo leh hal kiis oo togan toddobadii maalmood ee la soo dhaafay. Dhowr degmo oo Siouxland ah ayaa leh heer wax ku ool ah oo eber ah.
Waaxda Waxbarshada ee South Dakota waxay ku guuleysatay isku daygeedii labaad si ay sharci dejiyeyaashu u ansixiyaan shuruucda loogu oggolaanayo marijuana caafimaad ee dugsiyada dadweynaha.
Gobolka ayaa ka shaqeynaya sidii loo dejin lahaa barnaamijka xashiishka caafimaadka iyada oo loo marayo codbixiyeyaasha sharciga ee la ansixiyay sanadkii hore. Laakiin barnaamijku wuxuu arkay dib-u-soo-kabasho qallafsan mararka qaarkood.
Wiil dhalinyaro ah oo ku dhaawacmay shil ka dhacay Adventureland oo uu ku dhintay walaalkiis ka yar ayaa muujinaya astaamo yar yar oo horumar ah.
Qareenka u doodaya qoyska ayaa sheegay in David Jaramillo Jr oo 16 jir ah uu wali ku sugan yahay xaalad halis ah, laakiin araggiisa ayaa soo hagaagaya wuuna aqoonsan karaa una jawaabi karaa dadka kale.
Si kastaba ha noqotee, dhallinta ayaa la halgameysa xusuus la'aan iyo arrimaha dheef-shiidka.
Cusbooneysiintan caafimaad ayaa timid kadib markii usbuuc dhammaad ah loo sameeyay xus xusuus ah 11-jir Michael Jaramillo oo dhintay ka dib dhacdadii la xiriirta raacitaanka Raging River.